Shiinaha Pre-furitaanka tarooli loading iyo straightener ee diidanaa in la xirrira saarayaasha mashiinka iyo alaab | Zhongtuo
Pre-furitaanka tarooli loading iyo straightener ee diidanaa in mashiinka la xirrira
Pre-furitaanka tarooli loading iyo straightener ee diidanaa in mashiinka la xirrira maxay waxan Pre-furitaanka tarooli loading waxaa loo isticmaalaa? Normalling hadlayay, waayo gariiradda aad u qaro weyn, way adag tahay in saamaxaad gariiradda dib gariiradda in decoiler sida xoogga laabaya waa ilaa xad xoog leh. Ka dib markii la sii daayo gariiradda, madaxa wax soo kaban doonto oo ay fududahay in la dhaawaco dad ama ka dhigi cigta gariiradda kale place.Then loo baahan yahay qalab this ah. Waayo, dhumucda gariiradda hoos 3.0mm, sida caadiga ah ku hadla, ma aha ugana ...
Maxay waxan Pre-furitaanka tarooli loading waxaa loo isticmaalaa ?
Normalling hadlayay, waayo gariiradda aad u qaro weyn, way adag tahay in saamaxaad gariiradda dib gariiradda in decoiler sida xoogga laabaya waa wax xoog leh. Ka dib markii la sii daayo gariiradda, madaxa wax soo kaban doonto oo ay fududahay in la dhaawaco dad ama ka dhigi cigta gariiradda kale place.Then loo baahan yahay qalab this ah. Waayo, dhumucda gariiradda hoos 3.0mm, sida caadiga ah ku hadla, muhiim ma aha.
Sida laga soo xigtay heerka uu si toos ah, tarooli loading Pre-furitaanka iyo straightener ee diidanaa in mashiinka la xirrira kale oo uu leeyahay qaar ka mid ah kala duwanaanshaha. Waayo, Zhongtuo rogid qabow la xirrira mishiino, waxaan leenahay laba nooc:
Version Simple of Pre-furitaanka tarooli loading iyo straightener :
Feature Qaabdhismeedka: kooban yahay Farqiga U Bridge madal Haydarooliga dabacsan, madaxa cadaadinaya, iyo rollers xumaanta hurgumada leh. Sheet galaa straightener si toos ah ka dib markii xumaanta hurgumada leh. Toosinta rollers la tempering iyo chroming daaweyn kulaylka kuwaas oo wanaajin qallafsanaan dusha iyo roughness. Waxaa jira rollers qanjaruufo oo rollers toosinta. Rollers jiido si gaar ah waxbaa laga beddeli karaa.
Version of Higher Pre-furitaanka tarooli loading iyo straightener ee diidanaa in mashiinka la xirrira :
Pre-furitaanka tarooli loading, mashiinka si toos ah
nidaamka Tani waa habka pre-unwinding in qaadataa madaxa strip marka gariiradda loo diraa uncoiler ah a. Waqti Save for unwinding. Tarooli loading xambaartaa gariiradda steel iyo qaadaa birta gariiradda in usheeda dhexe ugu weyn ee uncoiler ah. Tarooli loading waxaa kexeeyey by motor a Haydarooliga. Rullaluistemadka An qoqobada firfircoon waxaa Jaha kor ku dheganaadaan gaariga loading inuu kaxeeyo gariiradda inuu isku shaandheyn lagu jiro pre-furitaanka.
Wiish hooyeen la eryay by dhululubo Haydarooliga. Qalab A madaxa falin, qalab madaxa si toos ah, isaguu feed ah iyo qalab ku tirtirayaan ah waxaa lagu abaabulaa on dhinaca tarooli loading ah. Madaxa falin in qalab madaxa falin la kordhiyay iyo hoos, Oo gacma iyo hoos waxaa ay gacanta ku dhululubo ee Haydarooliga.
Isaguu ku si toos ah loo isticmaalaa in lagu fidi madaxa strip for fudud ku soo galeen barbareysay ah oo gacanta dhululubo Haydarooliga. Gaariga ayaa daba socda wadataa xy si toos ah u xakameeyo loading ah
Uncoiler ee madaxa double la gaari loading iyo madaxa yaxaaska. Waxa loo isticmaalaa si ay u taageeraan wareeg ee gariiradda. Usheeda dhexe ugu weyn ayaa u taagay oo adkeeyay by dhululubo Haydarooliga wuu ugu dambaysiiyey. Ka dib markii gariiradda waxaa demisay, isaguu qanjaruufo la dhigayaa on gariiradda by dhululubo Haydarooliga. Gariiradda la eryay by motor a reducer dhajinta on top ah. Strip waxaa quudiyey galay barbareysay sicir bararka. Unwinding wuxuu isticmaalaa Fariin pneumatic. Kor uncoiler ah, waxaa jira rullaluistemadka cadaadiska in ka hortagtaa kitaabkii duudduubnaa ee a. Uncoiler waxaa lagu kartaa si buuxda loo tarjumay by dhululubo danbe Haydarooliga, plc waxaa ay gacanta ku feed sare, iyo ogaanshaha photoelectric si toos ah caanuhu.
Previous: nidaamka adhijirrada iyo alxanka buuxda automatic for uu diidanaa mashiinka la xirrira
Next: Birta Interlocked biibiile rito feer for biraha
10 Ton decoiler Haydarooliga la loading gaari waayo ...
Stud Track Machine, Rolling shutter Door Roll U samaynta Samaynta Makiinado , waxaad huwataa Birta U samaynta Makiinado , Machine Step Making Tile , Sheet saqafka Machine Making Tile, Line Tube Hg50,